यसरी गरियो कलाकार ‘बखते'(शम्भु थापा)को अन्तिम दा’ह’सं’स्कार(भिडियो सहित) – Charchit Entertainment
यसरी गरियो कलाकार ‘बखते'(शम्भु थापा)को अन्तिम दा’ह’सं’स्कार(भिडियो सहित)
जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भयो । बखते दाइ तपाईको मृ**त्युको खबर लेख्दा हात कापिहरेको छ । आज यो भगवानलाई मज्जाले गा*लि गर्न मन लागेको छ । भगवान तिमिले ती नारीको दु*ख किन देखेनौ ? जसले आफ्नो श्रीमान ब*चाउन श्रीमतिले गरेकि पुकार किन सुनेनौ भगवान तिमिले ? बुवा ब*चा*उन छोरिले गरेको मेहेनत किन देखेनौ भगवान ? आमाको मृ**त्यु भएको सात दिन मात्र भएको थियो । बखते दाइ आमाको काज*किरि*यामा बस्नु भएको थियो ।
एक्कासी कोरोनाको नजर कलाकार बखतेको शरीर तिर लाग्यो । शरीरमा अप्ठ्यारो अनुभव भए पछि शम्भु थापालाई तुरुन्तै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा भर्ना गरियो । कोरोनाको लडा*इ लड*दै थिए शम्भु दाइ, कोरोनाको कारण फोक्सोमा निमोनिया देखा पर्यो । निमोनियाले फोक्सो ड्या**मेज भै सकेको रहेछ । डाक्टरहरु अहोरात्र लागि परे शम्भु दाइलाइ ब*चा*उन । तर डाक्टरको पनि भगवानको अगाडि केही च*लेन । लामो समयसम्म पाटन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहनु भएका हामी सबैको प्यारो कलाकार बखते दाइलाइ आज स*दाको लागि बि*दाइ गरेको छ
आफ्नो जन्म दिने आमाको मृ**त्युको शो*क त छदै थियो बखते दाइलाइ । आमाकै काममा बसेको बेला पा*पी कोरोनाको नजर लागि अस्पताल भर्ना हुनु पर्दा कस्तो पी*डा भएको थियो होला बखते दाइ तपाइलाइ ? आफुलाइ जन्मदिने आमाको शो*क मा डुबेर आफ्नो कर्म संस्कार पनि पुरै गर्न नपाउदै छोडेर अस्पताल जानू पर्दाको पी*डा हामी सबैले देख्दा हामी पनि मन थाम्न सकेका छैनौ बखते दाइ ।
वरिष्ठ हाँस्य कलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’को नि’धन भएको छ । उहाँको शनिबार बिहान करिब साढे ४ बजे पाटन अस्पतालमा नि’धन भएको हो ।पारिवा रिक स्रोतका अनुसार कोरोना सक्रमित भए पछि थापालाई दुई साताअघि पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कलाकार थापा पछिल्लो समय टेलिफिल्म हल्का रमाइलो र गोलमालमा देखिँदै आउनुभएको थियो । उहाँलाई ९ दिनसम्म भेण्टिलेटरमा राखियो ।
कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि १९ दिन अगाडि अस्पताल भर्ना गरिएका थापाको स्वास्थ्यमा झन् जटिलता देखिएको कारण गत मंगलबार साँझबाट भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो ।कलाकार तथा निर्देशक जीवन थापाले भन्नुभयो दाईलाई जति प्रयास गरेपनि बचा**उन सकिएन । ‘१९ दिन अगाडि अस्पताल भ**र्ना हुनुभएका थापाको गत मंगलबार दिनसम्म अवस्था सा*मान्य नै रहेको थियो’ जीवनले भन्नुभयो ‘मंगलबार साँझबाट श्वास प्रश्वासलगायत केही समस्या देखिएकोले उहाँलाई थप उपचारका लागि भेन्टिलेटरमा सारिएको थियो ।’ (तल भिडियो हेर्नुस )
मोदनाथका छोरा जस्तै देखिने १४ वर्षीय बालक घरमा काम गर्दै गरेको भेटियो(भिडियो हेर्नुहोस्)
स्वीटजरल्याण्ड सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने
बैंकका अधिकांश शाखा कार्यालयहरु खुले